CHAMPIONS!!! Liverpool Oo Ku Guuleysatay FA Cup Oo Ay Rikoodheyaal Kaga Qaadday Chelsea - GOOL24.NET
CHAMPIONS!!! Liverpool Oo Ku Guuleysatay FA Cup Oo Ay Rikoodheyaal Kaga Qaadday Chelsea
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ku guuleysatay FA Cup, kaddib markii ay rikoodheyaal kaga badisay Chelsea ciyaar socotoay 120 daqiiqadood oo goolal la’aan ku dhamaatay.
Liverpool ayaa rikoodheyaal 5-6 ah kaga adkaatay Chelsea, waxaanay markii labaad taariikhdeeda isku darsatay FA Cup iyo Carabao Cup oo ay sidan oo kale ugu wada guuleysatay xilli-ciyaareedkii 2000-01, iyadoo labadan kooba ka qaaday Chelsea oo ay labada jeer ba rikoodheyaal isla yimaaddeen.
Chelsea ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee sannad gudihii ay hal koox ka wada qaaddo Carabao Cup iyo FA Cup, waxaanay sidan oo kale ku dhacday Middlesborugh sannadkii 1997kii. Waxa kale oo ay Chelsea noqotay kooxdii ugu horreysay ee saddex final oo FA Cup ah guul-darraysata, waxaana labadii xilli-ciyaareed ee u dambeeyey koobka ka qaaday Leicester City iyo Arsenal.
Cesar Azpilicueta ayaa Chelsea ka khasaariyey rikoodhihii labaad ee ciyaarta, hase yeeshee Mendy ayaa la baxsaday oo Sadio Mane ka qabtay rikoodhihii shanaad oo haddii ay dhalin lahaayeen ay Liverpool koobka u dabbaal-degi lahayd.
Alisson Becker ayaa kubadda ka qabtay Mason Mount oo tuurtay rikoodhihii toddobaad ee Chelsea, waxaana ka faa’iideeyey Kostas Tsimikas oo Liverpool u dhaliyey rikoodhaha lixaad ee u go’aamiyey guusha koobka FA Cup.
Ciyaartan oo socotay 120 daqiiqadood ayay labada kooxood si adag ugu dagaallameen, waxaana farusadaha badan iska khasaarisay Liverpool oo laba jeer birta garaacday ka hor intii aanu dhamaanin waqtigii caadiga ahaa ee ciyaartu.
Liverpool ayaa ku bilaabatay si dardar leh, waxaanay 30kii daqiiqadood ee ugu horreeyey dhawr jeer ku dhowaadeen inay shabaqa Liverpool soo taabtaan, hase yeeshee goolhaye Mendy ayaa ahaa xiddiga Chelsea ee cunaha qabtay Liverpool.
Tobankii daqiiqadood ee ugu horreeyey ayay saddex fursadood oo fiican heshay Liverpool, ka hor intii aanay Mason Mount iyo Alonso min hal mar tijaabin goolhaye Alisson oo haddii aanu feejignaan badan samayn lahayn ay kooxdiisu quus noqon lahayd qaybtii hore.
Mohamed Salah ayaa garoonka ka baxay daqiiqaddii 33aad kaddib dhaawac kasoo gaadhay lugta midix, waxaase uu dhaawaciisu yimid xilli uu cadaadis badan ku hayay difaaca bidix ee Chelsea oo uu xataa ku qasbay in Jorginho uu caawiyo Alonso oo orodkiisa xamili waayey.
Thiago Alcantara ayaa kubbad uu Andy Robertson keenay xerada ganaaxa waxa uu ku toogtay goolka ka hor intii aanay soo noqonin ee aanu Jota meel dhexe ka helin, kaas oo ku qabtay fooli balse uu goolhaye Mendy ka badbaadiyey.
Naby Keita ayaa lumiyey fursad dahabi ah xilli uu laba jeer uu kubbado goolal loo qaatay uu Luis Diaz la seegay shabaqa, kuwaas oo uu midkood ula tegay Mendy oo badbaadiyey, mid kalena uu birta dhinac mariyey.
Markii lagu soo noqday qaybta labaad ayuu Marcos Alonso birta u garaacay Liveproolmarkii uu kubbad laad xor ah kaga soo toogtay dhinaca midig.
Luis Diaz ayuu nasiibku ku xumaaday, waxaana qaybtii labaad birta kaga dhacday kubbad uu dhaafiyey goolhaye Mendy, iyadoo uu sidoo kalena dhawr jeer uu kubbado uu soo jaray goolka dhinac mariyey. Waxa sidoo kale kubbad uu goolka hortiisa ka helay Diogo Jota uu ku qabtay lugta bidix, taas oo kaliya u baahnayd inuu shabaqa ku leexiyo maadaama aanu usoo dhoweyn goolhayuhu, balse nasiib-darro birta ayay kaga dhacday.
Soddon daqiiqadood oo dheeraad ahaa oo lagu daray ciyaarta ayaa sidoo kale kusoo dhamaaday barbarro goolal la’aan ah oo ay labada kooxood ka faa’iidaysan waayeen, waxaana la dhigay rikoodheyaal iyadoo sidan oo kale bishii February na ay ciyaar socotay 120 daqiiqadood ay rikoodheyaal isla gaadheen labada kooxood finalkii Carabao Cup, taas oo ay Liverpool koobka ku guuleysatay.
Liverpool ayaa rikoodheyaashii la dhigay ku guuleysatay 6-5, iyadoo goolka guushana uu dhaliyey difaaca midig ee Kostas Tsimikas oo noqday geesiga cusub ee Liverpool.
Reds ayaa xilli ciyaareedkan ku wada guuleysatay FA Cup iyo Carabao Cup, waxaanay hadda ku tartamayaan Champions League oo ay finalka wada ciyaari doonaan Real Madrid iyadoo horyaalka Premier League ay saddex dhibcood ka dambeeyaan Man City oo ay ku ducaysanayaan in laga badiyo si ay horyaalka ugaga guuleysan karaan.